Xanuunku wuu dhici karaa | February 2020
Plant iyo illoobi: sida ay u koraan dhalinyarada ee xagaaga xagaaga
Ugu Weyn Ee Xanuunku wuu dhici karaa
Waxaa ka mid ah dhirta beerta waxaa jira kuwa kuwaas oo ficil ahaan ma u baahan tahay fiiro ka beerta, laakiin waxay ku siin karaan quruxdooda ku dhowaad hal sano. Kuwaas waxaa ka mid ah ubax dhalinyaro ah, ama dhagax ayaa kacay, sida badanaa la yiraahdaa. Roobka Molodil Molodil - Tani waa xal aad u fiican oo loo sameeyn karo qaababka kala duwan ee magaalooyinka, qurxinta waddooyinka beerta iyo jaridda sariiraha ubaxa.
Noocyo noocee ah ayaa ugu fiican wakhtiga qaboobaha xilliga qaboobaha? Doorashada iyo goosashada saxda ah
Doorashada noocyada ugu wanaagsan ee walnut
Waxyaalaha kala duwan ee beeraha "Bazhena"
Sida loo sameeyo bonsai ficus guriga
Qodobbada waxtarka leh ee xabagta
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Xanuunku wuu dhici karaa 2020